Taliyaha Ciidanka Xoogga ‘Odawaa’ oo ka hadlay xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey +(Shir jaraa’id) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Taliyaha Ciidanka Xoogga ‘Odawaa’ oo ka hadlay xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey...
Cadaado (Halqaran.com) – Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo caawa shir jaraa’id Ku Qabtay Magaalada Cadaado ayaa ka hadlay dhalinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey ee duleedka Balcad.
Taliyaha Odawaa ayaa sheegay in xoogga dalku aysan wax lug ah ku lahayn dhacdadii Khamiistii ka dhacday deegaanka Gololey.
Sidoo kale, Odawaa ayaa xusay, in baaritaano horudhac ah ay ku ogaadeen Ciidanka xoogga dhacdadaasi aysan ka dambeyn.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaan iyo hawlgal dhacdadaasi ku aadan, xogo horudhac ahna ay heleen, dhawaan ay soo bandhigi doonaan.
Dhalinyaradii la dilay ayaa ahaa Shaqaalaha Xarun MCH oo ku taalla deegaanka Gololeey, isla markaana rag hubeysan ay deegaankaas ka afduubteen, islamarkaana meydkooda laamiga deegaanka Gololeey la soo dhigay.
Meydadkii la soo dhigay deegaanka Gololeey ayaa waxaa kamid ahaa laba dhallinyaro ah oo caan ka ahaa degmada Balcad, kuwaas oo lagu kala Magacaabi jiray Cabdirisaaq Cabdullaahi Qobleey iyo Cumar Xuuti Filfil.